5 Xiddig Oo U Sharaxan Inay Kabtanimada Arsenal Ka Bedelaan Kabtanka Gadoodka Sameynaya Laurent Koscielny - Gool24.Net
5 Xiddig Oo U Sharaxan Inay Kabtanimada Arsenal Ka Bedelaan Kabtanka Gadoodka Sameynaya Laurent Koscielny
Mudadii sannadaha aheyd Arsenal waxaa soo maray kabtano xiddig waa weyn ah oo hogaamiyayaal sax ah ahaa.
Kabtanada sida Patrick Vieira, Gilberto Silva iyo Tony Adams ayaa si ku dayasho mudan u hogaaminayay Gunnes, waxay sarre u qaadayeen heerka asxaabta la ciyaareysay, waxayna ku mashquulsanaayeen kor u qaadista koobab.
Laakiin sida aan ka warqabno maalmahaas waa kuwa la soo dhaafay. Marka laga soo tago FA Cup, Arsenal waxay noqotay koox hoos u dhacday sannadihii u danbeeyay. Haddii ay ahaan laheyd intii uu Arsene Wenger tababaraha u ahaa ama Unai Emery, mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee lagu eedeeyo waa hogaamin la’aan.
Sannadkii la soo dhaafay, Emery waxa uu kabtankiisa koowaad u doortay Laurent Koscielny, halka Petr Cech, Aaron Ramsey, Mesut Ozil iyo Granit Xhaka loo doortay kabtan ku xigeeno.
Si kastaba, Cech ciyaaraha waa ka fariistay, Ramsey waxa uu aaday Juventus, Ozil mustaqbalkiisa lama hubo.
Haatana Koscielny waxa uu diiday inuu kooxda u la safro Mareykanka isagoo doonaya in la fasaxo, taasoo ka dhigeysa in Arsenal ay ku jirto mashaqo hogaamiye la’aaneed.
Iyadoo tababare Emery uu ka fekerayo xilli ciyaareedkiisa labaad ee Premier League, kumaa noqon kara kabtanka Arsenal?
5ta Xiddig Ee Kabtanimada Arsenal U Sharaxan
Granit Xhaka Waa ciyaaryahanka kaliya ee ka haray kabtan ku xigeenadii xilli ciyaareedkii hore ee u muuqda inuu kooxda sii joogayo, waana doorashada dabiiciga ah in loo dhiibo hogaaminta kooxda.
Xhaka waa ciyaaryahan aan ogolaanin in qaladaadkiisa ay wax u dhinto kalsoonidiisa, waana xiddig diyaar u ah difaacida Arsenal xitaa markii ay kooxda xaalada ka xun tahay, mana ahan ciyaartoyda isqariya marka guuldarro ay dhacdo. Qaladaadkiisa ciyaareed waxaa ka weyn awoodiisa hogaamineed.
Xiddigaha kale ee kula tartami kara kabtanimada Arsenal xilli ciyaareedka waxa ay kala yihiin: Sokratis Papastathopoulos, Lucas Torreira,, Nacho Monreal, Alexandre Lacazette.